China Amandla oMbane oKhanya ngeBhayisikile oMbane oPhezulu kunye noMthengisi | YIJIASHUN
Ibhasikithi yebhayisikile kunye neZilinganisi
Ibhayisekile BB Asi
Ibhayisekile ye-BB Shell
Ibhayisekile Brake lever
Iibhayisekile Cotter Pin
Ibhayisekile yeeFolokhwe Guard
Ibhayisikile yoGada oVimba oMbane
Ibha yokuPhatha ibhayisekile
Ibhayisekile ngaphakathi Tube
Ibhayisekile Ngaphakathi Tube Valve
Uxinzelelo lwempompo yeBhayisikile
Ibhayisekile Pump Impompo
Ibhayisekile ngasemva Derailleur
Isixhobo sokuLungisa iBhayisikile
Isihlalo sePosi seBhayisikile
Ibhayisekile Steel Ball Isigcini
Asi yebhayisekile / yokuluka
Iikomityi zebhayisekile zeBB
Ibhotile yeBhayisikile kunye neNkxaso
Ibhayisekile Brake Cable
Umntu ophethe ibhayisekile
Ikhava yeKhonkco yeBhayisekile
Ibhayike yentsimbi kunye neCrank
Ibhayisekile Ngaphambili Derailleur
Ibhayisekile HT Bolt
Umsila webhayisekile weBike
Ibhayisekile Pedal Asi
Ukukhutshwa ngokukhawuleza kweBhayisekile
Ibhayisekile yathetha kunye nengono
Ibhola yentsimbi yeBhayisikile
Ivili loQeqesho lwebhayisikile kunye nomlenze
Isikhuseli samavili eBike
Ukutsha kwakhona ukuKhanya okuPhezulu kweBhayisekile
Umzekelo No .:IKIA-LED-A20
Brake iinxalenye:Iiseti zeekhebula
Ukusekwa kweDerailleur:Derailleur yangasemva
Isakhelo seMpahla:Ingxubevange yeMagnesium
Izinto zebhasikidi yebhayisikile:Wicker
Izixhobo zebhayisekile:IAluminiyam / ingxubevange
Uhlobo lokukhanya:Kugqame, iDynamo
Indawo / ukuKhanya kwebhayisikile:Ukukhanya okungasemva
Isihlalo seShell Izinto:Iplastiki
Izinto zeFolokhwe:Ingxubevange yeMagnesium
Rechargeable Power ePhakamileyo UkuKhanya kweBhayisekile
Apha ngezantsi kuphakanyiswe uMnyama oPhakamileyo. ImibalaIbhayisekile Ukukhanya komsila Faka isibane seLed Light kunye neDynamo kunye nesibane sombane. Zonke iimodeli kunye nobukhulu bunokubonelelwa ngumzi-mveliso wethu. Iimodeli ezininzi ze-pls ndwendwela iwebhusayithi yethu ukujonga. Kwaye ungasithumela nophando ukuze ufumane imifanekiso kunye namaxabiso. Ilinde umyalezo wakho.
Umzimba wentsimbi Ukugqitywa komphezulu we-CP / ED Umphambili wangaphambili nangasemva Iimbonakalo: Iyahlala Imveliso eluhlaza Ukupakisha okunamandla Umsebenzi olungileyo Ukubonakala ngokugqibeleleyo Kulula ukusebenza Ukupakisha: 1pc / ibhokisi, 50pcs / baseKapa Ulwazi oluncedo: 1. Elona xesha lifutshane lokuhambisa 2. Ii-odolo ze-OEM kunye ne-ODM zamkelekile 3. Umnini welungelo lokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle ngqo
4. Ukunikezela ngesiqinisekiso sokhetho semvelaphi (njengeFom A, iFom E, iFom F)
Qho ngonyaka siza kuzimasa Shanghai CYCLE Fair ngoMeyi. Uyayibona ir yethuch iimveliso zebhayisikile kunye Iintsimbi zebhayisekile, emva koko ayisiyiyo le kuphela Izibane zebhayisekile zangaphandle ze-LEDiya kuboniswa kodwa nezinye iimodeli kunye nobukhulu zinokukhethwa. Ezifana neBhayisekile yeAluminiyam, iBhayisikile yeenyawo, kunye nezinye, ezithandwa kakhulu ngabathengi bangaphandle. Wamkelekile ukuba undwendwele umnquba wethu.
Apha ngezantsi kukho iimveliso zethu ezinxulumene noko, kunye neemveliso ezithengisayo ezisemgangathweni ophezulu kunye nazo zonke iindlela. Icandelo leebhayisekile Faka I-Chainwheel kunye neCrank, IiMpompo zokuphatha ibhayisekile, iiSaddles / isihlalo seBhayisekile, i-Brake, i-Bike Aluminium Pedal, iFreewheel, iBhayisekile asi, Isakhelo sebhayisekile, i-Mudguard, iLock, iiBell, iBhasikithi, iTire kunye netyhubhu yangaphakathi, izixhobo zokulungisa ibhayisekile, njl. Ungasithumela imifanekiso yakho nayo , uyilo lwakho lwe logo lunokwamkelwa, nalo. Ukuba unomdla kuyo nayiphi na into, nceda ungenise umbuzo wakho. Uya kufumana impendulo ekhawulezayo.
Inkonzo yeMveliso Okokuqala, -Iinkonzo, ngokuchanekileyo zithetha iNkonzo yokuThengisa kwangaphambili:
Kwinkampani yethu, bonke abamele intengiso banolwazi lobungcali kunye namava atyebileyo kurhwebo lwamanye amazwe, kwaye kwiinyanga ezintathu emva kokuzibandakanya nathi, basebenza eWorkshop, befunda zonke iimveliso 'kunye nemveliso. Banokuphendula nayiphi na imibuzo kubathengi kwaye banokunikezela abathengi ngezinye iingcebiso zokuthenga. Ke ngaphambi kokuba ubone iimveliso zethu, sinentembelo yokukubamba ngeenkonzo zethu zangaphambili zentengiso kwiiQela lethu lokuThengisa.
SineNkqubo yokuLawulwa koMgangatho ngokungqongqo, ngaphambi kokushiya indawo yethu yokugcina izinto, zonke iimveliso ziye zavavanywa sisixhobo esikhethekileyo kunye neQC. Umgangatho bubomi bethu kunye nesiseko sophuhliso.
Okwesithathu -Iinkonzo, ngokuchanekileyo zithetha Inkonzo yasemva kokuthengisa:
Sinodidi lokuqala loMhambisi weHlabathi kunye noMthengisi weMpahla njengamaqabane asebenzisanayo, banokubonelela ngokuhambisa ulwandle ngolwandle, kunye neNkonzo yobuNgcali kunye neKhawulezayo, ukuze sikwazi ukuqinisekisa ukuthuthwa kwethu okugqwesileyo.
Iikhathalo zomkhiqizo: Amandla okuKhanya okuKhanya okuKhanya okuKhanya okuKhanya Sinokhetho olubanzi kumaxabiso amahle ukukunceda ufumane ubuchule bokuyila. Zonke izibane zoMbane eziKhanyisiweyo zoMbane weeBhayisikile ziqinisekisiwe ngomgangatho. Siyi-China iMveliso yaseBattery egcwalisekayo ePhakamileyo yokuKhanya kweBhayisikile. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Egqithileyo Isibane seBhayisekile esiKhanyisiweyo
Okulandelayo: Ukusebenza okuphezulu okuphethe uMgcini
Iibhayisikile Phondo kunye noMfanekiso weKhathuni ngebhayisekile
I-Gel PU efanelekileyo ye-MTB Bike Saddle
Iifashoni zebhayisikile ezentofontofo
Amanqwanqwa eebhayisikile zentsimbi eguqulwayo
IsiXeko esiMnyama seBhayikhi yePiki yePlastiki yeenyawo
I-Handlebar yentsimbi yentsimbi ye-Bike Bell
Ngama-86-311-89640152 umlawuli@ikiacycles.com Sisebenza yonke imihla nge-9: 00-23: 00
© Copyright - 2010-2020: Onke amalungelo agciniwe. Imveliso eshushu - Imephu yendawo - Iimpawu